E-ARGENTINA liyadingeka FAKA 4,000 UKUZE 5,000 ATM mfihlo NGALÉ IZWE - Blockchain Izindaba
Argentina kungenzeka maduze umholi ATM emakethe mfihlo. Ngokusho yabezindaba, izwe ingalunga ukuthola phakathi 4,000 futhi 5,000 ATM ukuthi ukusekela zemali virtual.
Ngokwe-CEO umsunguli we Odyssey Group, Sebastian Ponceliz, i-ATM ngeke sisetshenziswe kuphela abantu kukhishwe imali kodwa futhi ukulawula zemali virtual, ngokusebenzisa bi Ohlangothi Bitcoin ATM.
"Kukhona yini Ngibiza Kuhlangana yemali okusenza zisebenzisa izinhlobo ezahlukene izindlela kwenkokhelo kanye lokushintshisana (ukheshe, mfihlo, e-wallets, ukwethembeka amaphuzu, njll) kanye womuntu wumxhumanisi ngoba okungukuthi i-ATM ezingaba transact lwemali oluningi, ukuvula imali digital ku nalokho ngokomzimba futhi okuphambene,"Kuchaza Ponceliz.
Odyssey Iqembu ingenye ATM abahlinzeki ngobukhulu e-United States, Mexico, Colombia naseSpain.
Isinqumo likhishiwe yinkampani ngokushesha emva kokuba uhulumeni Argentina yanquma ukushintsha imithetho iphinde ivumele amabhizinisi angasese ngumnikazi ATM ezitolo zabo nezitolo.
Ngokusho Coin ATM Radar, Okwamanje azikho ATM Bitcoin etholakala Buenos Aires.
Yocingo ICO izinhlelo
Yocingo ihlele mul ...
U.S. uhulumeni ...
Thumela Previous:Scientist.com umkhankaso platform yokuqinisekisa idatha blockchain ezisekelwe
Thumela Landelayo:US izishaya ukuzwa icala blockchain supply chain
May 8, 2018 ngesikhathi 12:31 AM
May 9, 2018 ngesikhathi 12:57 AM
May 20, 2018 ngesikhathi 12:27 AM
May 29, 2018 ngesikhathi 3:31 AM